UJonesboro, AR • Umzimba Wokugcotshwa kanye ne-NuRu Massage
Ungaphuthelwa yithuba lokubhukha umzimba wakho nge-nuru massage e-Jonesboro, AR,
IJonesboro idolobha eliseCrowley's Ridge ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga ye-US State of Arkansas. UJonesboro ungesinye sezihlalo ezimbili zesifunda saseCraighead County. Ngokobalo luka-2010, leli dolobha lalinabantu abangama-67,263 futhi idolobha lesihlanu ngobukhulu e-Arkansas. Ngo-2010, indawo yedolobha elikhulu laseJonesboro lalinabantu abangu-121,026 kanye nenani labantu abangu-163,116 eJonesboro-Paragould Combined Statistical Area. Ungaphuthelwa yithuba lokubhuka i- hlikihla umzimba futhi i-nuru massage eJonesboro, AR,